Accueil > Gazetin'ny nosy > Ravalomanana Marc : Nisolelaka any amin’i Véronique Vouland
Ravalomanana Marc : Nisolelaka any amin’i Véronique Vouland
Rehefa reraka ny mpanao politika dia lasa manaonao foana ankehitriny.
Andro vitsivitsy lasa izay dia nasain’ny ambasadaoron’i Frantsa eto amintsika tao an-tranony tetsy Ivandry ingahy Ravalomanana Marc izay mpanolotsaina ny kaominina eto Antananarivo renivohitra sy ny vady aman-janany. Rehefa avy tao amin’ity fihaonana ity izy sy ny ambasadaoro ny frantsa Veronique Vouland, dia nivoaka tao amin’ny trano ity ingahy Ravalomanana Marc ka nijerijery teo anoloan’ity toerana ity. Nasainy naongana ny fefin’ingahy Lola Rasoamaharo izay toerana vita titra ara-dalàna. Andro vitsy taorian’izany dia tonga ny mpiasa ny kaominina handrava ny fefy. Tsy afaka nanao ny asa fandravana nefa ireo mpiasa ireo na dia noteren’ingahy Ravalomanana Marc noho ny taratasy ara-dalana ananan’ny ankilany .
Ny mahagaga amin’ity raharaha ity dia tena tsy miraharaha lalàna mihitsy ingahy Ravalomanana Marc mampandrava fananan’olona toa ny fanaony tamin’ny filohan’ny repoblika azony tamin’ny fanonganampanjakana ny taona 2001.
Koa satria tamin’izany fotoana izany Ravalomanana Marc dia tsy niraharaha ny fanjakana frantsay mihitsy ka rehefa reraka sy nilaozan’ny allemand sy afrika atsimo ary ny amerikanina izao izy dia misolelaka any amin’ny frantsay indray ka izao manaonao foana izao.
Mahakasika ny momba ny fahazoandalana na “permis de construire” momba ny didim-panjakana laharana 2015-036 tamin’ny 16 febroary 2016 dia manana 15 andro ny lalàna hamalian’ny olona voakasika izany ka raha tsy mamoaka ny permis ny kaominina dia mandray ny andraikiny ny “Prefet de police” izay miandraikitra ny fanarahana ny ara-dalàna any amin’ny vondrombahoaka.
Ny ambasadaoro ny Frantsa ramatao Véronique Vouland dia tsy manaja ny lalàna Malagasy indray fa mitady hampanaonao foana ny kaominina tarihin’ingahy Ravalomanana Marc. Ny fanajana lalàna no fepetra voalohany amin’ny fiandrianam-pirenena iray.
Mamono ny Malagasy ity Covid-19 ity : Asakasakin’ny mpitondra sy ny mpitantana
Covid-19 : 75% ny olona marary no sitrana
Zandary : Kapiteny indray no mibaiko kolonely
Trangana Covid-19 aty Afrika : Eo amin’ny laharana faha-11 no misy an’i Madagasikara
Lalampirenena faharoa : Safononoky ny kolikoly ireo zandary eny andalambe
Politika : « Faible-be » ny mpanohitra